VANTAGE - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
VANTAGE waa barnaamijka waxbarasho xirfadeed ee sare ee Minnetonka High School. Iyada oo loo marayo barashada khibrada leh, ardayda waxaa loo muujiyaa tusaale firfircoon oo hal-abuur ku ah waxbarashada casriga ah. VANTAGE waxay siisaa hab gaar ah ardayda dugsiga sare si ay ugu dabaqaan shaqadooda koorsooyinka goobaha dhabta ah ee dunida. Ardaydu waxay xalliyaan dhibaatooyinka dhabta ah inkasta oo shaqooyinka ku saleysan mashruuca. Khibradda 'VANTAGE' waxaa ka mid ah ka shaqeynta hal-hal-qof oo la-taliye sanadka ah, waxbarista joogtada ah ee martida iyo booqashooyinka goobta, dhammaantood iyagoo fulinaya shuruudaha adag ee amaahda tacliimeed.
Xusuusin : Markii ay ardaydu iska diiwaangeliyaan hal koorso VANTAGE oo ku taal Skyward, waxaa si otomaatig ah looga qori doonaa dhammaan koorsooyinka la xiriira.
Liiska Koorsada Daabacan
Meelaha Feejignaanta iyo Xirfadaha Bartilmaameedka ah
Koorsooyinka VANTAGE (PDF)
VANTAGE waxay bixisaa sideed meelood oo diiradda la saarayo ama "xargaha:"
Khibradda VANTAGE waxay ardayda u oggolaaneysaa inay ku dhex koraan xirfadaha la bartilmaameedsaday ee VANTAGE:
VANTAGE Global Business (# V102) waxay bixisaa fursado kobcin ikhtiyaari ah oo loogu talagalay ardayda quusinaysa. Ardayda Gelida Imtixaanka waxay la kulmaan macalin luqadeed dhowr jeer bishiiba inta lagu gudajiro eber saac waxayna kaqeybqaataan wadahadalo luuqada koox yar oo kuxiran manhajka VANTAGE. Inta laga gaarayo barkadda lataliyaha sanadka, ardayda wax lagu barto waxaa lagu lamaaninkaraa lataliye laba luuqadle ah. Intaa waxaa sii dheer, mashaariicda VANTAGE iyo dhacdooyinka waxaa ka mid noqon kara fursado loo adeegsado luqadda bartilmaameedka xaaladaha dhabta ah ee dunida.
Koorsada Sayniska Kombiyuutarka
Koorsada Cilmiga Bulshada
Falanqaynta Ganacsiga (VANTAGE)
Koorso: # V100
Fasalada (yada) la bixiyo: 11 ama 12
Heerarka: 2.0 (dhibcaha xisaabta 1.0 iyo 1.0 ganacsiga la xushay)
Shuruudaha: Xiisaha ganacsiga adduunka iyo tirakoobka. Ardayda iska diiwaangelineysa IB Business Management HL waa inay dhameystireen heerka SL.
Koorsadani waxay ardayda baraysaa habka falanqaynta xogta weyn iyo helitaanka macluumaad cusub oo lagu taageerayo go'aan qaadashada maaraynta ee ganacsiga adduunka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Falanqaynta Ganacsiga (VANTAGE)
Naqshadeynta + Suuqgeynta (VANTAGE)
Koorso: # V104
Fasalada La Bixiyay: 10-12
Heerarka: 2.0 (1.0 Farshaxanka farshaxanka iyo dhibcaha ganacsiga ganacsiga ee 1.0)
Koorsadani waxay fulineysaa shuruudaha amaahda Farshaxanka.
Shuruudaha: Xiisaha suuqgeynta dhijitaalka ah, naqshadeynta garaafka ama wax soo saarka / naqshadaha warshadaha.
Koorsadani waxay isu keentaa foomka iyo u shaqeynta sida ardayda loo naqshadeeyo loona abuuro alaabada 2D iyo 3D. Ardaydu waxay bartaan sida suuqgeyntu u saamayso naqshadeynta iyo qaybinta alaabada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Naqshadeynta + Suuqgeynta (VANTAGE)
Saxafiyada Dijital ah (VANTAGE)
Koorso: # V600
Heerarka: 2.0 (1.0 loo baahan yahay amaah Ingiriisi ah iyo 1.0 farshaxan farshaxan)
Shuruudaha: Xiisaha warbaahinta dhijitaalka ah iyo saxaafadda
Ardaydu waxay wax ka bartaan wax soo saarka fiidiyowga suxufiga ah iyagoo ka shaqeynaya mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin qorista xusuus qor, ogeysiisyada adeegga dadweynaha iyo fiidiyowyo xayeysiis ah oo loogu talagalay abaabulka dibadda.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Saxafiyada Dijital ah (VANTAGE)
Ganacsiga Caalamiga ah (VANTAGE)
Koorso: # V102
Heerarka: 3.0 (1.0 amaahda cilmiga bulshada, 1.0 loo baahan yahay amaahda Ingiriisiga iyo deynta ganacsiga ganacsiga ee 1.0)
Shuruudaha: Xiisaha ganacsiga caalamiga ah, ardayda iska diiwaangelinaya IB Business Management HL waa inay dhammaystireen heerka SL
Qeybtan VANTAGE waxay ardayda u abuureysaa fursad ay ku sahamiyaan fikradaha kala duwan ee ganacsiga caalamiga ah iyagoo adeegsanaya muraayadaha caalamiga ah. Ardaydu waxay adeegsadeen fikirka adag iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka si ay u xalliyaan dhibaatooyinka ganacsiga ee qallafsan halka ay la tacaalayeen shaqada koorsada adag ee dhaqaalaha, Ingiriiska iyo ganacsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Ganacsiga Caalamiga ah (VANTAGE)
Joogtaynta Caalamiga (VANTAGE)
Koorso: # V300
Fasalada La Bixiyay: 11 ama 12
Heerarka: 2.0 (1.0 cilmiga xulashada sayniska iyo 1.0 amaahda cilmiga bulshada)
Shuruudaha: Xiisaha deegaanka iyo joogtaynta. Ardaydu waa inay dhammaystiraan buundada Bayoolaji ama si isdabajoog ah loogu qoro Biology (bayoolaji heer guud ah, AP Biology ama IB Biology SL)
Koorsadan khibrad leh waxay la kulantaa ardayda isgoyska sayniska, cuntada, joogtaynta, iyo dhaqaalaha. Ardaydu waxay ka shaqeeyaan mashaariicda dhabta ah markay si qoto dheer ugu dhaqmaan dhaqano waara.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waaritaanka caalamiga ah (VANTAGE)
Sayniska Caafimaadka (VANTAGE)
Koorso: # V200
Heerarka: 2.25 (1.0 amaahda cilmiga bulshada, 1.0 cilmiga xulashada sayniska, .25 deynta xulashada sayniska)
Shuruudaha: Sayniska jirka iyo aljabra; xiisaha sayniska caafimaadka; kimistari si adag ayaa lagula taliyay. Ardayda horay u dhammeeyay Anatomy uma qalmaan xariggan. Toos ula xiriir VANTAGE ama lataliyahaaga wixii ku saabsan waxyaabaha gaarka ah.
Baadh noocyo kala duwan oo daryeel caafimaad ah adoo u maraya shaqada koorsada, booqashooyinka goobta, tilmaamaha martida iyo mashaariicda. Noqo mid loo aqoonsan yahay Kaaliye Caafimaad oo Diiwaangashan ama Jawaab Caafimaad Degdeg ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sayniska Caafimaadka (VANTAGE)
Siyaasadda Dadweynaha (VANTAGE) - CUSUB 2021-22
Koorso: # V700
Fasalada (yada) la bixiyay: 11-12
Heerarka: 2.0 (1.0 Ingiriis amaah iyo 1.0 Daraasaadka Bulshada)
Shuruudaha: Xiisaha loo qabo sida loo dejiyo siyaasadda guud
Qeybtan VANTAGE waxay ardayda u abuureysaa fursad ay ku sahamiyaan adduunka dejinta siyaasadda guud iyada oo loo marayo koorso, mashruucyo, hagitaan, tilmaam marti ah, iyo booqashooyinka goobta. Ardaydu waxay adeegsadaan fikirka halista ah iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka si ay u qiimeeyaan su'aalaha siyaasada guud ee adag halka ay wax uga qabanayaan shaqada koorsada ee Ingiriisiga iyo cilmiga bulshada.
Akhriso inbadan oo kusaabsan siyaasada guud (VANTAGE) - CUSUB 2021-22
Khibrada Isticmaalaha (UX) Naqshadeynta (VANTAGE)
Koorso: # V500
Fasalada (yada) la bixiyo: 10-12
Heerarka: 2.0 (1.0 Farshaxanka farshaxanka iyo 1.0 sumcadda kombiyuutarka xulashada)
Shuruudaha: Xiisaha loo qabo sida barnaamijyada iyo degellada loo qaabeeyo loona horumariyo.
In la horumariyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka hal abuurka, hal-abuurnimo iyo qaabeynta aadanaha. Naqshadeynta iyo horumarinta barnaamijyada moobiilka iyo websaydhada iyada oo loo marayo khibradda VANTAGE.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Khibradda Isticmaalaha (UX) Naqshadeynta (VANTAGE)
Naqshad Skipper Log
Guriga Skipper Log
Xaashida Qorsheynta Diiwaangelinta
Hagaha Diiwaangelinta iyo Kulamada Macluumaadka
Quusin - Shiine iyo Isbaanish
Booqo Websaydhka VANTAGE
Soo Degso Buug-yaraha VANTAGE
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).
Arag heerarka tacliinta ee MDE
Diiwaanka Skipper (Katalogga Koorsada) /